“यो राइनो हैन गैंडा हो गैंडा” : प्रम ओली « Arthabazar.com
“यो राइनो हैन गैंडा हो गैंडा” : प्रम ओली
प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७६, सोमबार १५:०७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले अब द्रुतगतिमा आर्थिक विकास गर्ने बताएका छन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको नागरिक हवाइ नियामक क्षेत्रका महानिर्देशकहरुको ५६ औं सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिक संघर्षको युग सकिएर आर्थिक उन्नती र विकासको युग सुरु भएको बताए । “अब हामी हाम्रो यात्रा आर्थिक उन्नती र विकासबाट सुरु गर्छौं । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग पनि सहकार्य गर्छौं” प्रधानमन्त्री ओलीले भने “यो सहकार्यका लागि कतिपय अमिल्दा कानुनहरु संसोधन गर्छौं ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भौगोलिक रुपमा मात्र नभइ विविध क्षेत्रमा विविधता भएको देश भएकोले यहाँ द्रुत विकासको सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । विश्वकै आकर्षक मध्येको एकसिंगे गैंडा नेपालमा मात्र पाइने प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गराए ।
“यो राइनो हैन गैंडा हो गैंडा” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “यसको मौलिक नाम नबिगारौं । यो राइनो होइन ।” नेपालमा विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा मात्र होइन विश्वका अग्ला हिमाल मध्ये धेरै वटा नेपालमै रहेको बताउनुभएको छ । नेपाललाई विश्व मै सुन्दर देश भनिने गरकोे तर यसले मात्र नेपालको परिचय अपुरो हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “नेपाल सुन्दर मात्र होइन,प्राकृतिक स्रोतले पनि भरिपूर्ण देश हो” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो “यिनै स्रोतको उपयोग गरेर नेपालको विकासलाई तिव्रगतिमा अघि बढाउनु पर्दछ ।”
प्राकृतिक सम्पदा,हिमाल र जंगली जनावर हेर्न बर्षेनी लाखौं पर्यटन आउने भएकोले नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’ विश्वभरी हुनु पर्र्नेे प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा छ । “हामी नेपाललाई सुरक्षित गन्तव्यका रुपमा पहिचान गराउन चाहन्छौं । यसका लागि हाम्रो नीति र प्रयासहरु केन्द्रित हुनेछन् ” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
बैंकमा खाता खोल्दा सर्वसाधरणहरूको मनमा के खुलदुली होला? आफ्नो बचतको उच्चतम ब्याजदर उहाँहरूको
काठमाडौ । यस वर्षको ६३ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउन राष्ट्रिय सहकारी दिवस
काठमाडाै । एन आई सी एशिया बैंकले धनुषा जिल्लाको धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं.
काठमाडौं । खल्ती डिजिटल वालेट र भाटभटेनी ग्रुप बीच खल्ती एपबाटै मनी ट्रान्सफर